Valala fanetribe – Valala
Manana toetra telo ny valala fanetribe:
– Toetra mandeha irery (solitaire)
– Toetra manelanelana (transiens)
– Toetra mandeha andiany (grégaire)
Mandalo ambaratonga telo lehibe ihany koa ny valala fanetribe: Atody – Kijeja – valala manan’elitra na renim-balala. Ny antsoina hoe renim-balala dia valala lahy na vavy afaka manao firaisana.
NY TSINGERIM-PIAINAN’NY VALALA VAO
NY TSINGERIM-PIAINAN’NY VALALA MENA ELATRA
IREO DINGANA ARAHINA AMIN’NY FAMONOANA VALALA
Misy sehatr’asa telo lehibe sady mifampiankina ny famonoam-balala:
– Fitiliana sy fanairana
FITILIANA SY FANAIRANA: Misy tranga maromaro no ahafantarana ny fisian’ny valala, alohan’ny anaovana ny fitiliana:
-ny fandrefesana ny rotsak’orana
-ny famantarana ny toe-tany sy ny zava-maniry
-ny fiovan-toetran’ny valala
Rehefa voamarina sy mahafeno ireo tranga ireo dia atao ny fitiliana fa ahiana ny fisian’ny valala amin’ny toerana iray.
FANDAROFANA: ny fandarofana no ivon’ny asa famonoam-balala. Rehefa voamarina ny fisian’ny valala amin’ny toerana iray araka fepetra voalaza etsy ambony, dia afaka atao ny fandarofana.
Raha latsaky ny 10ha ny faritra rakotra valala, dia ireo vondron’olona any amin’ny fokontany VOI-MV (Vondron’olona Ifotony miady amin’ny valala) no mandray anjara amin’ny famonoana azy.
Raha 10ha ka hatramin’ny 100ha diany tompon’andraikitra ao amin’ny Poste (Responsable Poste Antiacridien) ao amin’ny IFVM no mamono azy.
Raha 100ha ka hatramin’ny 1000ha, dia ny tompon’andraikitra ao amin’ny faritra (Chef e Zone Antiacridienne) no mamono azy.
Raha 1000ha ka hatramin’ny 10 000ha, dia ny lehiben’ny mpandaroka (Chef Service Intervention Acridienne) no mandaray an-tanana azy.
Raha mihoatra ny 100 000ha kosa dia famonoana amin’ny alalan’ny fiara manidina no atao, izay ny Tale Teknika no mandrindra azy.
FAMPITAOVANA: Tsy tontosa ireo sehatr’asa roa etsy ambony raha tsy misy ny fitaovana. Ny sehatr’asa fampitaovana no mamatsy ny fitaovana rehetra mifanandrify amin’izaly ilaina, toy ny fanafody, fitaovana fandarofana, ny fiara, ny fitaovana fiarovana,ary fanamboarana sy ny fikojakojana ireo fitaovana rehetra ireo.